Wasiirka Warfaafinta Puntland oo ka jawaabay Eedeyntii C/weli Gaas (Dhageyso)
Garoowe:Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaa markii ugu horeysay si kulul uga jawaabay eedeymo uu Pro.Cabdi Weli Gaas u soo jeediyey Maamulka Puntland mar uu wareysi siiyey galabta idaacada Laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Wasiirka warfaafinta ee dowlada Puntland ayaa ku tilmaamay eedeymaha uu Pro.Cabdi Weli u soo jeediyey madaxada Puntland mid si cad u qeexeysa waxqabadkiisa xiligii uu ahaa Raisulwasaaraha DFS .
Wasiirka Warfaafinta Ee Puntland ayaa ganafka ku dhuftay dhamaan eedeymihii loo soo jeediyey dowlada Puntland oo ay ka mid ahayd in ay rabto in ay xilka kororsato iyo in ay caburisay saxaafada ,shacabka .
Wasiirka Warfaafinta Ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaa ku eedeeyey Raisulwasaarihii hore ee DFS Pro.Cabdi weli Gaas in uu xanibay oo uu is hortaagay deeqo caalami ah iyo mashaariic laga fulin lahaa Puntland sida dayactirka wadooyinka ,Dekeda waxaa kale oo u horistaagay deeqo waxbarasho oo ay xaq u lahaayeen ardayda Puntland .
Mar Wasiirka Warfaafinta Puntland la weydiiyey xil kororsiga ay wadaan Madaxda Puntland ayaa wuxuu ku jawaabay in Bishii April ee la soo dhaafay si rasmi ah loo ansixinayey dastuurka Puntland waxaana goobjoog ka ahaa ayuu yiri Raysal wasaare ku xigeenkiisi ahaana wasiirka Ganacsiga ee DFS Ugaas Cabdiwahaab Ugaas Khaliif ,Wasiiru dowlihii Dastuurka Xasan Maxamed Jimcaale iyo wasiiru dowlaha xafiiska Raisul wasaaraha Cali Nuur Ducaale iyo beesha Caalamka.
Wasiirka Warfaafinta Puntland ayaa sidoo kale diiday in shacabka iyo saxaafada lagu caburiyo Puntland wuxuuna tusaale u soo qaatay socdaalkii uu Raisulwasaarihii hore ku marayey Puntland isaga oo sidoo kale qabanayey shirar iyo kulamo siyaasadeed cid ka horistaagtayna aysan jirin.
Ugu danbeyntii ayaa wasiirka warfaafinta ee Puntland ayaa ka digay in lagu talaabsado wax kasta oo keeni kara in khalkhal la galiyo amniga Puntland wuxuuna sheegay in dowladiisa ay wado sidii looga bixi lahaa nidaamka qabaliga ah looguna gudbi lahaa nidaamka axsaabta badan.
Hoos ka Dhageyso Wareysiga ay VOA la yeelatay Wasiirka Warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Dirir
[audio:https://halgan.net/Mp3/Dirir.mp3] Isha Maqalka VOA
M M Deeq
Isha Maqalka VOA